» भोईस किड्स नेपालको ६ रोचक रेकर्डहरु
६ माघ २०७८, बिहीबार २१:०१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ६ माघ । द भोईस किड्स नेपालको सिजन १ मा त्यस्ता केही रेकर्डहरु बनेका छन् जुन रेकर्डहरुका बारेमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । यस भिडियो सामग्रीमा हामी द भोईस किड्स नेपालका ६ वटा रेकर्डहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
रेकर्ड नम्बर १– द भोइस किड्स नेपालको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोड कुन होला ? तपाईलाई लाग्नसक्छ सायद फाईनल नै हो कि ? तर होईन । द भोईस किड्स नेपालको सबैभन्दा बढी हेरिएको एपिसोड दोस्रो एपिसोड हो । यस एपिसोडमा ब्लाईण्ड अडिसनबाट ७ जना प्रतियोगीहरु ब्याटलका लागि छानिएका थिए । फाईनलमा पुगेका चर्चित प्रतियोगी सुप्रिम मल्ल ठकुरी यसै एपिसोडबाट छानिएका थिए । यो एपिसोडलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ४७ लाख ३८ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी लाईकहरु गरिएका छन् ।
रेकर्ड नम्बर २– द भोइस किड्स नेपालको सर्वाधिक हेरिएको क्लिप कुन प्रतियोगीको थियो ? यस बारेमा तपाईको अनुमान नमिल्न सक्छ तर तपाईलाई ती प्रतियोगीको बारेमा धेरै कुरा थाह छ । हजुर द भोईस किड्स नेपालको सर्वाधिक हेरिएको क्लिप पेमा दिछेन तामाङको अडिसन क्लिप हो । उनले ब्लाईण्ड अडिसनमा गाएकी ‘डाँडापाखा छहराले’ बोलको क्लिप नै द भोईस किड्स नेपालको सिजन १ मा सर्वाधिक हेरिएको क्लिप हो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयसम्म उनको यो अडिसन क्लिपलाई २८ लाख ७५ पचहत्तर हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ५७ हजार लाईकहरु गरिएका छन् । द भोईस किड्स नेपालको विजेता दाबेदार मानिएकी पेमालाई ब्याटलबाट नछानेकोमा कोच राजुलाई दर्शकहरुले आलोचना गरेका थिए । त्यसपश्चात कोच प्रविशाको टिममा स्टिल भएकी पेमा सेमिफाईनलबाट बाहिरिएपछि त्यसको पनि निक्कै विरोध भएको थियो । उनले उत्कृष्ट २४ को प्रस्तुतिका क्रममा चौथो दिन पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । पेमा द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल नवौँ प्रतियोगी हुन् । ८ वर्षिया पेमा दार्जिलिङ निवासी हुन् ।
रेकर्ड नम्बर ३– द भोइस किड्स नेपालको ब्लाईण्ड अडिसनबाट छानिएका पहिलो प्रतियोगी को हुन् ? के तपाईलाई थाहा छ ? सायद तपाईलाई सम्झना हुनसक्छ । उनी हुन् काठमाडौँकी श्रेयसी आचार्य । ७ वर्षीय श्रेयशीले कोच प्रविशाको टिमबाट सेमिफाईनल अर्थात उत्कृष्ट १६ सम्मको यात्रा तय गरेकी थिईन् ।
रेकर्ड नम्बर ४– द भोईस किड्स नेपालको पहिलो सिजनमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ घुमाउन सफल पहिलो प्रतियोगी को हुन् ? सायद तपाईलाई सम्झना हुनसक्छ । द भोइस किड्स नेपालको ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुको कुर्सी आफुतर्फ फर्काउन सफल पहिलो प्रतियोगी हुन् अनुजा कडरिया । उनी कोच प्रविशाको टिमबाट फाईनलसम्म पुगेकी थिईन् । ९ वर्षीया अनुजा बिर्तामोड झापा निवासी हुन् ।
रेकर्ड नम्बर ५– द भोईस किड्स नेपालको पहिलो सिजनमा सबैभन्दा छिट्टो कोचको कुर्सी घुमाउने प्रतियोगी को हुन् ? सायद तपाईहरुले भुल्नुभएको छैन होला । हजुर, द भोईस किड्स नेपालको ब्लाईण्ड अडिसनमा सबैभन्दा छिट्टो कोचको कुर्सी घुमाउन सफल प्रतियोगी हुन् जेनिश उप्रेती । उनले करिब ३ सेकेण्डमै कोच राजु र कोच मिलनको कुर्सी घुमाउन सफल भएका थिए । उनी द भोईस किड्स नेपालको ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ घुमाउन सफल चौथो प्रतियोगी पनि थिए । हेटाँैडामा जन्मिएका जेनिशले कोच प्रमोदको टिमबाट सिजन १ को टाईटल पनि जितेका छन् ।
रेकर्ड नम्बर ६– द भोइस किड्स नेपालका पहिलो अवार्ड विजेता को हुन् ? तपाईलाई यसको बारेमा पनि याद हुनसक्छ । उनी हुन् रामेछापका क्षितिज पौडेल । उनले लाईभ राउण्डबाट सेमिफाईनल अर्थात उत्कृष्ट १६ मा छानिने क्रममा पहिलो पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । सुरुमा कोच राजुको टिममा रहेका क्षितिजले स्टिल हुँदै कोच मिलनको टिमबाट सेमिफाईनल सम्मको यात्रा तय गरेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–